सिओपिडी निर्मुल हुँदैन तर नियन्त्रण गर्न सकिन्छः डा निरज बम (भिडियो वार्ता) :: रिता लम्साल :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
सिओपिडी निर्मुल हुँदैन तर नियन्त्रण गर्न सकिन्छः डा निरज बम (भिडियो वार्ता)
रिता लम्साल बुधबार, मंसिर १, २०७८, १८:३२:००
काठमाडौं– श्वासप्रस्वास सम्बन्धी दीर्घकालिन रोग सिओपिडिको समस्या भएका अधिकांश बिरामीहरु उपचारका लागि काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छाती रोग विशेषज्ञ डा निरज बमले बताएका छन्।
उनले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सेवा नपुगेको हुनाले सिओपिडीका बिरामीले समान्य समस्या देखिने बित्तिकै काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका हुन्।
डा बमका अनुसार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै पनि भर्ना हुने बिरामीमध्ये सबैभन्दा धेरै सिओपिडीको समस्या भएका बिरामी रहेको जानकारी दिए। उनले सिओपिडीका बिरामीका लागि उपचारको व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय तहमै पनि हुनुपर्ने बताए।
यो रोग निर्मुल नहुने तर नियन्त्रण भने गर्न सकिने उनले बताए।
डा बमका अनुसार नसर्ने रोगहरुबाट विश्वमा धेरै मानिसहरुको मृत्यु हुने गरेको छ। त्यो मृत्युको कारक मानिएका प्रमुख रोग मध्ये सिओपिडी पनि एक प्रमुख कारक तत्व हो।
सन् २०३० सम्ममा मृत्यु हुने प्रमुख रोगहरुमा सिओपिडी तेस्रो नम्बरमा आउन सक्ने आँकलन समेत गरिएको छ। त्यसैले सिओपिडीलाई साइलेन्ट किलरको रुपमा लिइन्छ।
हाल वर्षेसी ३ करोड व्यक्तिको मृत्यु सिओपिडीको कारण हुने गरेको र २०५० सम्ममा प्रत्यक वर्ष ६ करोडको मृत्यु हुनसक्ने आकलन गरिएको डा बमको भनाइ छ।
वातावरण प्रदुषण, धूम्रपान सेवन, काठ तथा दाउरा बाल्दा निस्किने धुँवा लगायतका कारण सिओपिडीको समस्या बढ्दै गएको डा बमले बताए।
सिओपिडी कस्तो खालको रोग हो? मानिसहरुमा यो रोग किन लाग्छ? सिओपिडी भएको कसरी थाहा पाउने? यस्तो रोगका बिरामीको उपचार कसरी गरिन्छ? सिओपिडीका विषयमा भ्रम र यर्थाथहरु केके छन्? लगायतका बिषयमा डा बमसँग कुराकानी गरेका छौं ।
प्रस्तुत छ डा बमसँग गरिएको भिडियो कुराकानी: